Samsung Galaxy Note7ကိုအမေရိကန်လေယာဉ်အားလုံးပိတ်ပင် Androidsis
Samsung Galaxy Note7၏ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနှေးကွေးခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်းသည်တစ်ဆင့်ချင်းစီနှင့်နေ့ရက်များကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအတွက်သတင်းများက ပို၍ ဆိုးဝါးလာသည်။
ဒီပေါက်ကွဲသောပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းသည်နိုင်ငံတစ်ဒါဇင်တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိသည့် အချိန်မှစ၍ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက် Samsung က“ စားသုံးသူများ၏လုံခြုံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်” US Note အားလုံး၏ Galaxy Note7ကိုပိတ်ပင်ထားသည်.
1 Galaxy Note7သည်တားမြစ်ထားသောအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
2 အဓိပ္ပါယ်အဆုံး: စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
Galaxy Note7သည်တားမြစ်ထားသောအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
မနေ့ကကတည်းက Samsung Galaxy Note7terminal ကိုသယ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမည်သည့်သုံးစွဲသူမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မည်သည့်လေယာဉ်ကိုမှဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန၊ ဖက်ဒရယ်လေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပိုက်လိုင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနတို့မှပစ္စည်းအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းအားလုံးမှတားမြစ်ထားသည်။
con တားမြစ်ချက်ကဆိုသည်အကြီးမားဆုံးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုနှင့် Samsung ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်စေသောကိရိယာ "တားမြစ်ထားသောအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်း" အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည် ဖက်ဒရယ်အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများစံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်အခြေခံသည်။
Samsung Galaxy Note7စက်ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်သောသူများသည်၎င်းစက်ကိုမိမိ၏လူ၊ သယ်ဆောင်ရမည့်အိတ်များ၊ သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ၊ သို့ထွက်သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၌ခရီးဆောင်အိတ်များတွင်သယ်ဆောင်။ မရပါ။ ဤတားမြစ်ချက်တွင် Samsung Galaxy Note7ကိရိယာများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။
စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်စနေနေ့ ၁၂း၀၀ နာရီတွင်ယနေ့ မှစ၍ စတင်ပါ။ (ယူအက်စ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းအချိန်) Galaxy Note7သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမည်သည့်လေယာဉ်ကိုမဆိုပိတ်ထားသည့်တိုင်မည်သည့်လေယာဉ်ပေါ်သို့တက်။ မရ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနမှအရေးပေါ်အခြေအနေအရညွှန်ပြသည့်အတိုင်းသက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း၏မည်သည့်မော်ဒယ်ကိုမျှခရီးသည်တစ် ဦး အားလက်ဆွဲအိတ်အဖြစ်မထည့်သွင်းနိုင်ပါ။
"ဒီဖုန်းတွေကိုလေကြောင်းလိုင်းတွေဆီကနေပိတ်ပင်ခြင်းဟာခရီးသည်တချို့အတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လေယာဉ်ပေါ်ကလူအားလုံးရဲ့လုံခြုံမှုကို ဦး စားပေးရမယ်" ဟုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွင်းဝန် Anthony Foxx ကပြောကြားသည်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်တစ်ခုတည်းသောအဖြစ်အပျက်သည်ပြင်းထန်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနှင့်အသက်ပေါင်းများစွာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထပ်ဆင့်ခြေလှမ်းကိုလှမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
အင်အားသုံးတားမြစ်ချက်ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားသူမည်သူမဆိုအတွက်အကျိုးဆက်များမှာအလွန်လေးနက်သည်။ ထို့ကြောင့်လေယာဉ်ပေါ်တွင် Samsung Galaxy Note7ကိုမိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသူသည်ဒဏ်ငွေနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အပြင် terminal ကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းသည်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မည်။ စစ်ဆေးထားသောခရီးဆောင်အိတ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လျှင်အကျိုးဆက်များမှာပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ဒီကိစ္စမှာ, အသုံးပြုသူများကိုရာဇဝတ်တရားစွဲဆိုနိုင်, သက်ဆိုင်ရာဒဏ်ငွေရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိခြင်းအပြင်။
Samsung Galaxy Note7၏မည်သည့်မော်ဒယ်ကိုမဆိုယူအက်စ်တွင်ပျံသန်းခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်ပင်ခြင်းသည်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကိုအမြဲတမ်းရပ်ဆိုင်းထားသည် ထိုဆိပ်ကမ်းများအနက်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်လက်လီဖြန့်ချိသူများအား Galaxy Note7ကိုရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည် အချို့အစားထိုးပစ္စည်းတွေလည်းမီးပေါ်မှာရှိကြ၏.
ကျွန်ုပ်တို့သည် Galaxy Note7နှင့် ပါတ်သက်၍ မကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့သောဖြစ်ရပ်များကိုစုံစမ်းရန်သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်အညီလုပ်ဆောင်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စားသုံးသူလုံခြုံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်နေသောကြောင့် Samsung က Galaxy Note7၏ရောင်းအားနှင့်အစားထိုးခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအော်ပရေတာများနှင့်လက်လီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရပျကိုယူပြီးနေစဉ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောခြေလှမ်းများလှမ်းရန်သင့်လျော်သောစည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များနှင့်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။ မူရင်း Galaxy Note7သို့မဟုတ်အစားထိုး Galaxy Note7ပစ္စည်းရှိသည့်သုံးစွဲသူများသည်ပိတ်ထားသင့်ပြီးစက်ကိုမသုံးတော့ပါ နှင့်ရရှိနိုင်အရင်းအမြစ်များ၏အားသာချက်ယူပါ။
Samsung သည် Device အသစ်များအားမည်သည့်အပြစ်အနာအဆာဖြစ်စေသည်ကိုမသိရှိရသေးသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံရသည် Galaxy Note7ထုတ်လုပ်မှုကိုစွန့်လွှတ်မည်အများပိုင်ကုမ္ပဏီကိုသိသိသာသာပျက်စီးစေသည့်အပြင်၊ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအတွက်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂.၃၀၀ သန်းခန့်ဖြစ်ပေါ်စေမည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းတစ်ခုကဖော်ပြသည် Samsung အသုံးပြုသူ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှ terminal ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung Galaxy Note7ကိုအမေရိကန်လေယာဉ်အားလုံးပိတ်ပင်